Ambongadiny Manana "tsiambaratelon'ny tsiro lehibe" izahay hilaza aminao ny ozinina sy mpanamboatra | SMOORE
Manana "tsiambaratelon'ny tsiro lehibe" holazaina aminao izahay
Hatramin'ny taona 2018 raha niorina tamin'ny voalohany ny marika teknolojia FEELM, dia natolotra ho teny filamatra ho an'ny marika ny "For Next Pod". Manolotra kalitao sy traikefa premium, ny pod manaraka tarihan'ny teknolojia FEELM dia safidy tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa miliara manerantany.
ver nanomboka tamin'izay, nanangona injenieran'ny R&D ambony izahay ary nampihatra ny siansa fototra toy ny fitaovana, hydromekanika, aerodinamika ary thermodinamika hananganana sehatra teknolojika atomika mitarika an'izao tontolo izao.
Amin'izao fotoana izao, ianao dia afaka mahita poleta mihidy miaraka amin'ny coil ceramic FEELM manerana an'izao tontolo izao. Ny mpiray antoka aminay dia mitazona tsena 70% sy 30% isan-tsokajiny ao amin'ny tsenan'i Sina sy Amerika. Saingy tsy mitsahatra mijery ny fitakian'ny mpanjifa izahay. Inona no tena tadiavin'izy ireo? Inona no ifantohan'izy ireo? Vitantsika ve ny manome fahafaham-po ny fangatahan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandrosoana amin'ny teknolojia?
Fizarana 1 Inona no hitantsika?
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nandefa fanadihadiana manerantany ny FEELM ary nanangona valin-valiny an'arivony. Mandritra izany fotoana izany dia nandinika tatitra momba ny fanadihadiana sy hevitra momba ny matihanina maro izahay.
Ary nanatsoaka hevitra izahay fa ny tena tadiavin'ny mpanjifa dia ny tsiro.
Hatramin'ny nanombohana ny paompy nikatona feno ny haitao FEELM tamin'ny fiandohan'ny taona 2018, nanangona fanamarihana tsy tapaka avy amina mpampiasa farany an'aliny izahay. Miorina amin'ny famakafakana sy fampitahana multidimensional dia hitantsika fa aleon'izy ireo polipitra entin'ny coil coélnel FEELM noho ny vokatra teknolojia fanamainana hafa, indrindra amin'ny lafiny mikasika ny tsiro toy ny malama, ny famoahana, ny fahombiazan'ny fandefasana nikôtinina ary ny tsy fitoviana.
Fizarana 2 Inona no nolazain'izy ireo?
Ny valiny avy amin'ny mpanjifa an'aliny dia manondro fa ny tombony lehibe azo amin'ny vokatra misy FEELM ao anatiny dia ny tsiro mahafinaritra. Raha ny tsiambaratelo miafina amin'ny tsiro lehibe dia mitoetra ao amin'ny FEELM Ceramic Coil.
Fizarana 3 Tsiambaratelo ho an'ny tsiro lehibe
Ny teknolojia manafana dia manatsara ny fiainantsika ary ny FEELM dia manome tsiro kokoa ny vaping.
Androany, ny FEELM dia manitsy ny haitao fanafanana, mifangaro amin'ny haitao farany ary mandova ny fanahin'ny faharanitan-tsaina. Manomboka amin'ny coil voalohany ka hatramin'ny faha-arivo tapitrisa, ny FEELM dia mifanaraka amin'ny kalitao avo lenta, manome traikefa miavaka miavaka erak'izao tontolo izao.
COEL Ceramic Coel, tsiambaratelon'ny tsiro lehibe.
Tsy mitsahatra manadihady ilay tsiambaratelo miafina izahay.
Solony mifoka, E sigara etona ranoka, Newport E sigara, Sigara hafanana, E Kitapo Blitter sigara, Epen,